रुखबाट लडेर सिम्तामा एक महिलाको ज्यान गयो – Vision Khabar
रुखबाट लडेर सिम्तामा एक महिलाको ज्यान गयो
। १५ आश्विन २०७५, सोमबार १८:०१ मा प्रकाशित
दुर्गा वि.सि. सल्यान । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालीका वडा ९ टमाटेनामा रुखबाट लडेर सक्त घाईते वलमान गिरीकी ५८ वर्षिया श्रीमति खम्बा गीरीको उपचार गर्न लिदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको छ ।
असौज १३ गते वेलुकी घाँसकाट्न जँगल गएकोवेला रुखबाट लडेर घाईते गिरीलाई खोजतलास १४ गते विहान आफ्न्तले फेला पारेका थिए । उपचारका लागि नेपालगञ्ज लिने क्रममा बन्गाड कुपिण्डे वडा नं. ११ को धारापानी नजिकै रहेको खनिया खर्क जाने ग्रामिण सडक मर्मत कार्यले छिन्चु जाजरकोट सडकको उक्त स्थानमा १ घण्टा अवरुद्ध गरेको थियो ।
हाईवय माथि ग्रामिण सडक कार्य मर्मत हुदाँ माथिको ढुङ्गा माटोले बाटो अवरुद्ध वनाए पछि विरामी नेपालगञ्ज लिन ढिलाई भएको आफ्न्तको दुखेसो छ । घाईतेलाई ठिक समयमा उपचार गर्न लिन नसकेका कारण वचाउन नसकिएको जनाएको छ ।
खोजीतलासी गर्दा उतै ढिला भयो तेसैमा खनिया खर्क जाने सडकको मर्मत कार्यले घण्टौ राजमार्ग वन्द हुदाँ मृत्यु हुन पुगेको आफ्न्तको दुखेसो छ । सक्त घाईतेलाई उपचार गर्न लिने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको आफ्न्तले वताएका छन् । ग्रामिण सडक निर्माणका क्रममा डोजरले उक्त स्थानको मुख्य राजमार्ग समेत छेदविच्छेद वनाएको छ ।